सेरोफेरो : किन्न नपाइने पुस्तक प्रदर्शनी
किन्न नपाइने पुस्तक प्रदर्शनी
तपाईं मजदुर आन्दोलनसँग जोडिएका पुस्तकको खोजीमा हुनुहुन्छ वा वातावरणीय न्यायबारे प्रकाशित सामग्री? कि मानव अधिकारसम्बन्धी जान्न खोजिरहनुभएको छ? पुस्तकका निम्ति पसल र संघसंस्थापिच्छे धाउँदा दिक्क लागेको हुन सक्छ। त्यसो हो भने एउटा मौका आउँदैछ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले प्रकाशित गरेका पुस्तकको प्रदर्शनी मंसिर २६ देखि ३० सम्म राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौंमा हुँदैछ। हिमाल एसोसियसन र मार्टिन चौतारीले आयोजना गर्ने ´वैकल्पिक पुस्तक प्रदर्शनी´ मा २८ प्रकाशकले भाग लिनेछन्।
प्रदर्शनीमा आयोजक संस्थासँगै इसिमोड, रुम टु रिड, इन्सेक, डब्लुडब्लुएफ, रिड नेपाल, जिफन्ट, फेकोफोन आदि पनि सहभागी हुनेछन्। प्रदर्शनी बिहान १० देखि ५ बजेसम्म खुला रहने आयोजकले जानकारी दिएका छन्।
कामको सिलसिलामा गैरनाफामूलक प्रकाशकहरुले विभिन्न विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिरहेका छन्। मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ता कृष्ण अधिकारीका अनुसार यस्ता प्रकाशनले ज्ञान निर्माण र विस्तारमा सघाइरहे पनि पसलमा पाउन गाह्रो छ। ´त्यसैले यो प्रदर्शनी उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरेका छौं´– उनले भने।
प्रदर्शनीमा पुस्तकका अलावा अप्रकाशित प्रतिवेदन, जर्नल, पत्रिका, बुलेटिन पनि उपलब्ध हुने हिमाल एसोसिएसनका बजार व्यवस्थापक बासु सिलवालले बताए। प्रदर्शनीबाट यी संस्थाले कस्ता सामाजिक मुद्दामा काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
´गैरसरकारी संस्थालाई डलरको खेती भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ। यो वाक्यको मुल्याङ्कन गर्न उनीहरुका कामबारे जान्नु जरुरी छ´, मार्टिन चौतारीका मिडिया अध्येता शेखर पराजुली भन्छन्– यो प्रदर्शनी त्यस्ता संस्थाले चालेका अभियानमा अन्तरसंवाद गर्ने अवसर पनि हो।
२०६२ देखि आयोजित यो प्रदर्शनी २०६४ मा भने हुन सकेन।